Ampianaro ny Zanakao hoe Nahoana no Ilaina ny Miasa
Nahoana Isika no Mila Miasa?
INONA no tianao kokoa, miasa sa milalao?... Tsy ratsy akory ny milalao. Resahin’ny Baiboly fa ‘feno ankizilahy sy ankizivavy nilalao teny an-dalambe’ tany Jerosalema.—Zakaria 8:5.
Faly ilay Mpampianatra Lehibe nijery ankizy nilalao. Hoy izy, talohan’ny nahatongavany tetỳ an-tany: ‘Mpità-marika teo anilan’Andriamanitra aho, ka niravoravo foana teo anatrehany.’ Mariho fa niara-niasa tamin’i Jehovah i Jesosy tany an-danitra. Hoy izy tamin’izany: “Naharavoravo ahy ny zanak’olombelona.” Eny, tena niahy ny olona rehetra ilay Mpampianatra Lehibe, anisan’izany ny ankizy, araka ny efa hitantsika.—Ohabolana 8:30, 31.
Inona no nahafinaritra an’ilay Mpampianatra Lehibe tamin’izy mbola tsy tetỳ an-tany?
Mba nilalao ve i Jesosy tamin’izy mbola kely, araka ny hevitrao?... Azo inoana fa nilalao izy. Niasa koa ve izy tetỳ an-tany, satria “mpità-marika” na mpiasa nahay izy tany an-danitra?... Nantsoina hoe “Zanaky ny mpandrafitra” i Jesosy. Nantsoina hoe “ilay mpandrafitra” koa anefa izy. Milaza inona izany?... Milaza izany fa tsy maintsy ho nampianatra azy i Josefa, satria notezainy toy ny zanany izy. Lasa mpandrafitra koa àry i Jesosy.—Matio 13:55; Marka 6:3.
Mpandrafitra nahay ve i Jesosy?... Tsy ho lasa mpandrafitra nahay ve izy tetỳ an-tany, satria efa mpiasa nahay tany an-danitra? Ahoana ny hevitrao?... Eritrereto fa mafy be ny asan’ny mpandrafitra tamin’izany fotoana izany. Tsy maintsy nandeha lavitra i Jesosy mba hikapa hazo sy hanapatapaka izany ary hitondra azy nody. Avy eo vao nandrafitra izany ho latabatra, dabilio, na zavatra hafa izy.
Nahafaly an’i Jesosy ve izany asa izany, araka ny hevitrao?... Ho faly ve ianao raha mahay manao latabatra sy seza ary zavatra hafa tsara tarehy ho an’ny olona?... Lazain’ny Baiboly fa tsara ho an’ny olona ny ‘mifaly amin’ny asany.’ Hafa ny fifaliana azo rehefa miasa, fa tsy mitovy amin’ny fifaliana azo rehefa milalao.—Mpitoriteny 3:22.
Tena mahasoa ny saintsika sy ny vatantsika ny asa. Mipetrapetraka sy miresadresaka amin’ny namany fotsiny ny ankamaroan’ny ankizy, na mijery tele sy manao lalao video. Lasa kamo sy maditra izy ireny, ary tsy sambatra mihitsy. Tsy faly amin’izy ireny koa ny olon-kafa. Mila manao inona isika mba ho sambatra?...
Nianarantsika tao amin’ny Toko 17 amin’ity boky ity, fa mahasambatra ny manome sy manao zavatra ho an’ny olon-kafa. (Asan’ny Apostoly 20:35) Antsoin’ny Baiboly hoe “Andriamanitra finaritra” i Jehovah. (1 Timoty 1:11) ‘Ravoravo foana teo anatrehany’ koa i Jesosy, araka ny novakintsika tao amin’ny Ohabolana. Nahoana i Jesosy no sambatra?... Izao no nolazainy fa nahasambatra azy: “Ny Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa.”—Jaona 5:17.
Tsy nanao ny asan’ny mpandrafitra foana i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany. Nisy asa manokana nasain’i Jehovah nataony koa. Inona izany, raha fantatrao?... Hoy i Jesosy: ‘Tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra aho, satria izany no nanirahana ahy.’ (Lioka 4:43) Nino azy ny olona nitorian’i Jesosy indraindray, ka nitantara ny zavatra nataony, tahaka ilay vehivavy samaritanina hitanao eto.—Jaona 4:7-15, 27-30.
Inona ireo asa roa nataon’i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany?
Nanao ahoana i Jesosy rehefa nanao io asa io? Tiany ve ny nanao ilay izy, araka ny hevitrao?... Hoy izy: “Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany.” (Jaona 4:34) Faly be ve ianao rehefa mihinana ny sakafo tianao indrindra?... Azonao an-tsaina amin’izay hoe tena faly koa i Jesosy, rehefa nanao ny asa nasain’Andriamanitra nataony.
Mahasambatra antsika ny mianatra miasa. Izany no namoronan’Andriamanitra antsika. Lazainy fa fanomezana avy aminy raha ‘mifaly amin’ny fisasarany ny olona.’ Tena hahafinaritra àry ny fiainanao raha mianatra miasa dieny mbola kely ianao.—Mpitoriteny 5:19.
Tsy midika izany hoe mahavita ny asan’ny olon-dehibe ny ankizy kely. Misy asa azontsika rehetra atao anefa. Angamba mandeha miasa isan’andro i Dada sy Neny mba hahazoanareo vola hividianana sakafo sy hananana trano hipetrahana. Fantatrao anefa fa betsaka ny asa tokony hatao ato an-trano, mba hampadio sy hampilamina azy io.
Inona avy no asa mahasoa ny mpianakavy azonao atao?... Afaka mandahatra ny vilia sy sotro hisakafoanana ianao, manasa vilia, manary fako, mampirin-trano ary mampirina ny kilalaonao. Efa ataonao angamba ny sasany amin’ireo. Tena mahasoa izany.
Nahoana no tokony hampirimina ny kilalaonao rehefa avy milalao ianao?
Andeha hojerentsika hoe nahoana no mahasoa ny asa toy izany. Tokony hampirimina ny kilalao rehefa avy milalao ianao. Nahoana no tena ilaina izany, hoy ianao?... Hilamina foana ny trano amin’izay, ary mety tsy hitranga ny loza. Raha tsy ampiriminao mantsy ny kilalaonao, dia mety handalo eo i Neny indray andro any, hitondra entana betsaka ary hanitsaka kilalao. Mety ho voafingana izy ka hianjera ary haratra. Mety ho voatery hiditra hopitaly mihitsy aza izy amin’izay. Tena hampalahelo izany, sa ahoana?... Handray soa àry ny rehetra, raha mampirina ny kilalaonao ianao rehefa avy milalao.
Misy asa hafa koa tokony hataon’ny ankizy. Manao devoara, ohatra. Mianatra mamaky teny ianao any am-pianarana. Mahafinaritra ny ankizy sasany ny mamaky teny, fa sarotra kosa izany ho an’ny ankizy hafa. Mety ho sarotra ilay izy amin’ny voalohany, nefa ho faly ianao raha mianatra mamaky teny tsara. Betsaka mantsy ny zavatra tsara azonao ianarana, rehefa mahay mamaky teny ianao. Ho afaka hamaky samirery ny bokin’Andriamanitra, na ny Baiboly, mihitsy ianao. Tena mandray soa ianao, rehefa manao tsara ny devoaranao, sa tsy izany?...
Misy olona kamo miasa. Mahafantatra olona tahaka izany angamba ianao. Mila mianatra ho tia miasa anefa isika, satria noforonin’Andriamanitra mba hiasa. Tena tia ny asany ve ilay Mpampianatra Lehibe?... Toy ny hoe nihinana ny sakafo tiany indrindra izy tamin’izany. Inona io asa noresahiny io?... Ny firesahana tamin’ny olona momba an’i Jehovah Andriamanitra sy ny fomba hahazoan’izy ireny fiainana mandrakizay.
Ireto àry misy zavatra hanampy antsika ho tia miasa. Manontania tena hoe: ‘Nahoana no ilaina hatao ity asa ity?’ Ho mora kokoa aminao mantsy ny manao ilay asa, rehefa fantatrao hoe tena ilaina hatao ilay izy. Ataovy tsara koa ilay izy, na asa kely na asa lehibe. Amin’izay dia hifaly amin’ny asan’ny tananao ianao, tahaka an’ilay Mpampianatra Lehibe antsika.
Afaka manampy olona ho mpiasa tsara ny Baiboly. Vakio izay lazain’ny Ohabolana 10:4; 22:29; Mpitoriteny 3:12, 13; Kolosianina 3:23.
Hizara Hizara Nahoana Isika no Mila Miasa?
Manaova Madio sy Milamina